Maitiro ekugadzirisa kukanganisa -54 mu iTunes | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa kukanganisa -54 mu iTunes
Pakati pemhosho dzakawanda dzatinogona kuwana kana tiri kushandisa iTunes hapana zvatingade kuona. Muchikamu chino isu tichaedza kujekesa kusahadzika kwese kwaungave uine maererano ne kukanganisa -54, kukanganisa kwakajairika muWindows kupfuura kuMac, asi muApple's operating system tichazviona pazviitiko zvisingawanzoitika. Pane dzakawanda zviitiko zvine hukama ne iTunes midhiya raibhurari.
1 Zvinokonzera kukanganisa -54
2 Maitiro ekugadzirisa kukanganisa -54 mu iTunes
2.1 Isu tinogadziridza iyo system
2.2 Sarudza raibhurari zvakare
2.3 Gadzirisa raibhurari neCrashPlan
2.4 Skena iyo system neako antivirus
2.5 Chenesa iyo system kubva kune zvisina basa uye zvenguva pfupi mafaera
2.6 Uninstall uye dzosera iTunes
2.7 Dzorera nyika yapfuura
2.8 Gadziridza madhiraivha
2.9 Gadzirisa zvinyorwa zveWindows
Zvinokonzera kukanganisa -54
Yakaora kurodha kana kusakwana kuiswa kweTunes.
Windows registry yekupinda yakashatiswa neazvino iTunes-inoenderana nesoftware shanduko (kuisirwa kana kusabvisa).
Virus iyo yakashatisa Windows system mafaera kana mamwe mafaera ane hukama neTunes.
Chimwe chirongwa chakadzima mafaera ane chekuita neTunes nekukanganisa kana nechinangwa. Muchiitiko chechipiri, inenge iri mhando yehutachiona.
Chinhu chekutanga chatichaita, senguva dzose, kutarisa kana tiine chero zvadzakamirirwa. Kana tiinayo, tinoiisa kunyangwe isiri iTunes pachayo.
Sarudza raibhurari zvakare
Chinhu chinotevera chatichaita kuvhura iTunes nekudzvanya ALT (Mac) kana Shift (Windows) uye sarudza iyo "iTunes" dhairekitori kuti uone raibhurari zvakare. Zvinogoneka kuti nenzira iyi zvese zvinoshanda nemazvo zvakare.
Gadzirisa raibhurari neCrashPlan
Kana raibhurari yakashatiswa uye isu tisingakwanise kuitora nekuratidzazve nzira yayo, pane chishandiso chinogona kubudirira. Inonzi CrashPlan uye ndeye mahara. Matanho ekudzoreredza raibhurari nechirongwa ichi anotevera:
Isu tinovhura CrashPlan.
Isu tinowana iyo iTunes folda.
Tinodzvanya pane desktop kuti tichinje nzvimbo yekudzoreredza.
Sarudza raibhurari zvakare senge nzira yapfuura.
Skena iyo system neako antivirus
Chinhu chinotevera chatichaita kumhanyisa yedu antivirus kuona kuti hatina chero mhando software iyo inogona kunge ichikonzera iyo -54 kukanganisa. Zvine musoro, zvichienderana nesoftware isu tinoshandisa akasiyana interface uye system.
Chenesa iyo system kubva kune zvisina basa uye zvenguva pfupi mafaera
PaMac, yakanaka yemahara yekuchenesa chishandiso iri eonikisi (yakabhadharwa, CleanMyMac ndiyo yakanakisa). ZveWindows, chishandiso chakanakisa ndeche CCleaner. Kana iwe usingazive chaizvo zvauri kuita, zvinokurudzirwa kuti iwe uite iyo yekuchenesa yakakosha zvakanyanya. Kana iwe ukaedza kuchenesa zvakanyanya, unogona kudzima mafaera anobatsira kwauri.
Uninstall uye dzosera iTunes
Pamusoro peTunes, isu zvakare tichabvisa uye nekuisa ese ane hukama software.
Dzorera nyika yapfuura
PaMac, isu tinokwanisa kushandisa Time Machine kuti tidzokere kudunhu pamberi pekupedzisira shanduko yakaitwa. PaWindows, isu tinoshandisa iyo yekudzorera system.
Nenzira imwechete nesoftware, zvinogona kudaro iyo -54 kukanganisa kwakabva kune vatyairi vechinyakare. PaMac, izvi zvinongoerekana zvaitika, asi paWindows hazvisi nguva dzose, kunyanya mushanduro dzekare. Unogona kushandisa MutyairiDoc yeWindows, iyo inokusevha nguva, kushanda nesimba uye hutano paunenge uchizvitsvaga.
Gadzirisa zvinyorwa zveWindows
Ongorora: Nezvikonzero zvekuchengetedza, hadzisi nhanho dzese dzakabatanidzwa munzira iyi. Wese munhu ane mhosva yezviito zvake kana vakaisa maoko avo pane registry registry.
Izvo zvinyorwa zverejista ndezvimwe zvezvinhu izvo zvinogona kutipa bvudzi senge spiki, uye hazvishamise. Asi hei, pano isu tichaedza kutsanangura zvekuita kugadzirisa zvakaora zvinyorwa zvinogona kukonzera iyo -54 kukanganisa.
Isu tinonyora "raira" pasina makotesheni mukutsvaga, asi hatirove Enter.
Isu tinochengeta iyo Kudzora + Shift makiyi akadzvanywa uye, ikozvino, tinodzvanya Enter.
Muhwindo, tinodzvanya Hongu.
Muhwindo rinowoneka, tinonyora "regedit" pasina makotesheni uye tinya Enter.
Mune mupepeti, tinosarudza zvinyorwa zvine chekuita nekanganiso - 54 (semuenzaniso, iTunes) yatinoda kuchengetedza.
Mune iyo menyu menyu, tinosarudza Export.
Mune iyo Sevha runyorwa, isu tinosarudza dhairekita kwatinoda kusevha iyo iTunes registry zvinyorwa.
Mufaira zita rebhokisi, tinonyora zita refaira redu rekuchengetedza se "iTunes Backup" pasina makotesheni.
Muhwindo rekunze, tinova nechokwadi chekuti "Sarudza bazi" rinotariswa uye tinya Sevha. Iyo faira ichachengetedzwa pamwe nekuwedzera .reg.
Sezvandambotaura kare, kuitira kuchengetedzeka uye kutipodza muhutano, une nhanho dzinotevera kunze kweActualidad iPhone. Mune inotevera chinongedzo iwe une gwara reWindows 7, asi ini ndavashandisa uye vanogara vachishanda zvakafanana.
Rongedza zvinyorwa zve log mukati Windows 7
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa kukanganisa -54 mu iTunes
Kana iwe uchida jailbreak iOS 9.0.2, gadziridza iwe uchikwanisa
Maitiro ekudzima "kazhinji masayiti" muSafari yeIOS 9